आधारातमा 'मेक-अप' गर्ने डाक्टरहरू :: आयास लुइँटेल :: Setopati
चकमन्न रात छ। बिहानको करिब साढे एक बजे उसको भिभो मोबाइलको अलार्म बज्छ।
ऊ झसंग बिउँझिन्छ तर केहीबेर आँखा चिम्म गरिरहन्छ। केही क्षण त उसलाई आफू कहाँ सुतिराखेको छु भनेर सम्झनै गाह्रो पर्छ।
उसले थाहा पाउँछ- ऊ त आफ्नो अस्पतालको ड्युटी रूममा पो सुतिराखेको छ।
त्यत्तिकैमा उसले सम्झिन्छ, बिहान दुई बजेदेखि आठ बजेसम्म कोभिड आइसियुमा उसको ड्युटी पो छ। त्यसैले त उसले साढे एक बजेको अलार्म राखेर सुतेको थियो। कोभिड वार्डका काम सक्दासक्दै राति ११ बजिसकेको थियो। दुई घन्टाको छोटो विश्राम पनि ड्युटीमा खटिने डाक्टर-नर्सका लागि ठूलो कुरा हो।
ऊ उठेर बाथरुम छिर्छ। धारा खोलेर अनुहारमा पानी छ्याप्प छ्याप्दै ऐना हेर्छ। उसलाई आफ्नो अनुहार पुक्क सुन्निएको जस्तो लाग्छ। भर्खरै सुतेर उठ्दा त शाहरूख खानको अनुहार पनि यस्तै फुल्दो हो- मनमनै यस्तो सोचेर ऊ फिस्स हाँस्छ।
अबको केहीबेरमा उसलाई अस्पतालको पहिलो तल्लातिर ओरालो लाग्नुछ। कोभिड वार्ड बाहिर नर्सिङ स्टेसन छ जहाँ उसले भित्र जाने तयारी गर्नुपर्ने छ। घडीले बिहानको पौने दुई बजाएछ। १५ मिनेटमा पिपिइ लुगा लगाएर उसलाई कोभिड आइसियुतिर उकालो लाग्नुछ। उसलाई नर्सिङ स्टेसनको एउटा दराजबाट आकाशे नीलो रङको लुगा निकाल्नुछ र लगाउनुछ।
ऊ त्यहाँ पुग्छ र सामुन्नेको बाथरुममा छिरेर लुगा फेर्छ। अनि आफूले लगाएको लुगा फुकालेर प्लास्टिकको झोलामा राख्छ।
नर्सिङ स्टेसनको साँघुरो ठाउँमा ड्युटी सकेर केही नर्सहरू असजिलो गरी सुतिराखेको उसले देख्छ। ड्युटीमा खटिएकी एक जना नर्ससँग ऊ मास्क माग्छ र पालैपालो नीलो रङको पिपिइ लुगा लगाउन सुरू गर्छ।
सबभन्दा पहिले मोजाजस्तै गोडादेखि घुँडासम्म ढाक्ने पिपिइ लगाएर ऊ 'आर्मी' रङको बुट लगाउँछ। त्यसपछि गाउनजस्तो पिपिइमा दुवै हात छिराएर ऊ बोल्छ, 'सिस्टर, पछाडि तुना बानिदिनोस् न!'
नर्सले उसले भनेझैं गरेर पिपिइ टिमिक्क पारेर तुना बान्दिन्छिन्।
अब ऊ एन-९५ मास्क र त्यसमाथि लगाउने सर्जिकल मास्क मिलाउन थाल्छ। बेसिनमाथिको ऐना हेर्छ र मुखभरी पेपर टेप टाँस्न थाल्छ। मास्क र अनुहारबीच कुनै खाली ठाउँ नहोस्, उसले टेप टाँस्नुको उद्देश्य यही हो।
टेप टाँस्दाटाँस्दै उसको मनमा एउटा विचारले जन्म लिन्छ- यो अँधेरी रातमा ऐना हेरेर उसले कस्तो मेक-अप गर्दैछ?
उसको जिउ एकछिन सिरिंग हुन्छ। पाउदेखि शिर पिपिइले ढाकेर, मुखभरी मास्क र अनुहारभरी टेप। यो अनौठो मेक-अप देखेर ऊ एकैछिन टक्क अडिन्छ। उसलाई भनन्न रिंगटा चल्छ। तर लामो सास लिएर सम्हालिन्छ।
उसले घरका बुढा आमा-बालाई सम्झिन्छ। मन कुँडिएर आउँछ। अर्को अस्पतालमा यस्तै ड्युटीमा तल्लीन आफ्नी मायालुलाई सम्झिन्छ। मन झन् भरिएर आउँछ।
अब उसले पिपिइको टोपी र फेसशिल्ड लगाउन बाँकी छ।
ऊ त्यत्तिकै अडिएको देखेर नर्स बोल्छिन्- डक्टर ! के भयो तपाईंलाई?
ऊ पुनः सम्हालिँदै टोपी र फेसशिल्ड लगाउँछ। एकैछिन त उसलाई यो सब ड्युटी छाडेर र गुम्सिएको पिपिइ फालेर खुला हावामा जाऊँ झैं हुन्छ। तर ऊ मनमनै आफैंलाई सम्झाउँछ।
अब भने ऊ कोभिड वार्डको ढोका खोलेर भित्र पस्छ।
बन्न त डाक्टर बन्यो तर उसलाई सानैदेखि कथा-कविता सुन्न-लेख्न मनपर्ने। कोभिड आइसियुमा ड्युटी सम्हाल्न लागेको यो ड्युटी-डाक्टरलाई असाध्यै मनपर्ने महाकवि देवकोटाको एउटा कविता छ।
ड्युटीले थलिँदा, मन हतास हुँदा उसले ती कविताका लाइनहरू सम्झिने गरेको छ।
कुन सामग्री पूजा गर्ने, साथ कसोरी लाने हो?
साथी यात्रीबीच सडकमा ईश्वर हिँड्दछ साथ, चुम्दछ ईश्वर काम सुनौला गरिरहेका हात।
ड्युटी-डाक्टर कोभिड वार्डका निरश करिडोरहरूमा यिनै लाइनहरू गुन्गुनाउदै हिँडिरहेको छ।
ड्युटी-डाक्टरको मनमा फेरि अर्को विचारले जन्म लिन्छ- कोभिड वार्डका हरेक भित्ताहरूमा सायद यी लाइनहरू कुँदिनुपर्छः चुम्दछ ईश्वर काम सुनौला गरिरहेका हात!
कोभिडको तेस्रो लहरका बीच अस्पतालहरूमा यस्तै ड्युटी गर्ने कैंयन स्वास्थ्यकर्मी एवम् कर्मचारीहरू कोभिड पोजिटिभ भएका समाचारहरू आइरहेका छन्। यी लाइनहरू लेख्दै गर्दा म आफैं पनि दोस्रोपटक कोभिड पोजिटिभ भएर होम आइसोलेसनमा बसेको छु।
सामजिक सञ्जालका टाइमलाइनहरू एकातिर बढ्दो कोभिडको समाचारले भरिएका छन् भने अर्कातर्फ अस्पताल तोडफोड, स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात, डाक्टरको लापरबाही जस्ता सनसनीखेज हेडलाइनहरू पनि समाचार बनिरहेका छ्न्।
बीचमा दुर्व्यवहारको सिकार भएर, डाक्टरी पेसा नै छाडेर, देश छाडी विदेश गएर व्यवसाय गरिरहेका एक जना डाक्टरको आत्मरोदन पढ्ने मौका मिल्यो। मन झन् खिस्रिक्क भयो।
केहीअघिको एउटा यस्तै समाचार थियो- बेलायत दस हजार नर्सलाई आफ्नो देशमा भित्र्याउने तरखरमा।
यो समाचार पढेर हामी खुसी हुनुपर्ने हो कि दुखी? सोच्न सकिराखेको छैन।
डाक्टर महान प्राणी होइनन्। न त केही मानिसले सोचेजस्तो घमन्ड र धनको पुन्ज। डाक्टरका कमीकमजोरी पक्कै पनि छन्। सुधार्नुपर्छ। सच्चिनुपर्छ। तर जसरी चौतर्फी रूपमा सेतो एप्रोनमाथि हिलो छ्याप्ने अवस्थाको सिर्जना हुँदैछ, यसले कसैको पनि भलाइ हुने छैन। देशमै बसेर देशबासीकै रोगव्याधको उपचार गर्छु भन्ने सोच राख्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन र प्रेरणा दिनुपर्नेमा किन अझ निराश र निरुत्साहित बनाइँदैछ?
यो कुनै अतिरञ्जित गनगन होइन। एउटा शालीन तर गम्भीर चेतावनी हो, सरोकारवाला ती सबैलाई जसको जिम्मेवारी हो स्वास्थ्यकर्मीलाई यो देशमा टिकाउने।
याद राख्नुस्, यदि अवस्था नसुध्रिने हो भने- निद्रा मारेर, परिवार छाडेर आधारातमा कोभिड मेक-अप गर्दै बिरामीको ज्यान बचाउन लागेका ती हातहरू काम्नेछन्।
दुःखका साथ भन्नुपर्छ– एउटा स्वास्थ्यकर्मीलाई आफ्नो हरियो पासपोर्टमा रंगीचंगी भिसाको छाप लगाएर भुर्र उड्न कुनै बन्धनले रोक्ने छैन।
(डा. आयास लुइँटेलका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ ३, २०७८, ०४:१५:००